प्रदीप र पारमितालाई ‘रोज’ को सुटिङ सक्नै सकस ! « Ramailo छ
प्रदीप र पारमितालाई ‘रोज’ को सुटिङ सक्नै सकस !
फिल्म ‘रोज’ हलमा लाग्न दुई साता मात्रै बाँकी छ । तर फिल्म युनिट भने अझै एक्सन कटमा व्यस्त छ । गत सातादेखि सुरु भएको छायाँकन सक्न अझै केही दिन लाग्नेछ जानकारी छ ।
नायक प्रदीप खड्का र नायिका पारमिता राज्य लक्ष्मी शाहले सुटिङका रमाइला तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन । तस्बिर अनुसार प्रदीप र पारमिता निकै रमाइलो गरिरहेका छन् । रमाइलो सँगै उनीहरुलाई फिल्मको सुटिंग सक्न निकै कष्ट परिरहेको छ । किनकी छायाँकान सकेर केही दिनमै प्रचारको लागि देशदौडाहमा लाग्नु पर्नेछ । ‘रोज’ मा प्रदीप र मिरुनासँगै नायिका मिरुना मगर पनि मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत भएकी छन् । प्रोमो हेर्नुस् :
निरक पौडेल निर्देशित रोज सस्पेन्स क्राइम जनरामा आधारित छ । ‘रोजी’ बाट ‘रोज’ बनेको फिल्म कुनै सत्य घटनामा आधारित फिल्म नभएको निर्माण पक्षले दाबी गर्दै आइरहेको छ । फिल्म भदौ २२ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ ।